OTU ESI EMELITE KỌMPUTA NA KỌMPUTA - ITUNES - 2019
Ugbu a, ihe oyiyi disk na-aghọwanye ndị a ma ama na ebe niile, na CD na DVD dị iche iche na-aga n'ihu n'akụkọ ihe mere eme. Otu n'ime ihe kachasị mfe iji mee ihe, ya mere ihe omume ndị a na-eme maka iji ihe oyiyi ndị a rụọ ọrụ bụ Alcohol 120%. Usoro a na - arụ ọrụ nke ọma - a na - emepụta diski (drive) nke ọma (nke a na - emepụta ihe oyiyi) ma ọ bụ ihe omume ndị ọzọ. Dịka, a na-ekepụta ha mgbe ha na-etinye mmanya na-aba n'anya 120%.
Ma na ụfọdụ, ịkwesịrị ịmepụta disk diski n'ime mmanya na-aba n'anya 120%. Ọzọkwa, ọrụ nke ịmepụta ụgbọala dị mkpa maka ikpe mgbe ịkwesịrị iji oge abụọ ma ọ bụ karịa kwadoro disks. A na-arụ ọrụ a n'ụzọ dị nnọọ mfe na ngwa ngwa.
Download ụdị mmanya ọhụrụ 120%
Ntuziaka maka ịmepụta disk diski na Alcohol 120%
Na nchịkọta nhọrọ na nchịkọta dị n'aka ekpe, họta ihe "Ngwaọrụ Diski" na mpaghara "General". Ọ bụrụ na ịnweghị ịhụ ihe a, pịgharịa gaa na wiil ma ọ bụ pịa bọtịnụ mpịakọta na menu.
Kọwaa ihe niile dị ka achọrọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọrụ ahụ nwere ike ịmepụta ọtụtụ draịva dị. Iji mee nke a, na-esote ihe odide ahụ "Ọnụ ọgụgụ disk diski:" ịkwesịrị ịhọrọ nọmba ha. Ọ bụrụ na i meela otu mbanye, ị ga-ahọrọ ọnụọgụgụ 2 n'ebe ahụ iji mepụta diski diski nke abụọ.
Pịa bọtịnụ "OK" na ala nke ibe.
Mgbe nke ahụ gasị, diski ohuru ohuru ohuru ga-apụta na menu nhọrọ.
Ya mere, usoro a dị mfe na-enye gị ohere ịmepụta diski ọkpụkpọ ọhụrụ na otu n'ime usoro mmemme kachasị ewu ewu nke taa mmanya na-aba n'anya 120%. Enwere ike ịhụ na a na-eme ihe niile ngwa ngwa ma dị mfe, yabụ na onye ọrụ novice ga-enwe ike ịnagide ọrụ a.